Warshadda Nidaamka Miisaamidda - Soosaarayaasha Nidaamka Culayska Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
JJ – LPK500 Qulqulka dheelitirka qulqulka
Kala hagaajinta qaybaha
Astaamaha astaamaha farsamada sixitaanka xusuusta
saxsanaanta sare ee maaddooyinka
LIW taxanaha luminta-ee-miisaanka miisaanka cabbirayaasha ayaa ah shey-cabbir tayo sare leh oo loogu talagalay warshadaha habka. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa xakamaynta isdaba-joogga socodka socodka joogtada ah iyo habka xakamaynta dufcadda saxda ah ee granular, budada, iyo walxaha dareeraha ah ee goobaha warshadaha sida caagga iyo caagagga, warshadaha kiimikada, metallurgy, cuntada, iyo quudinta hadhuudhka. LIW taxanaha luminta-miisaanka miisaanka cabbirayaasha waa nidaam quudin sare oo sax ah oo loogu talagalay mechatronics. Waxay leedahay kaladuwanaansho ballaaran oo quudin ah waxayna la kulmi kartaa codsiyo kala duwan. Nidaamka oo dhami waa sax, waa la isku halleyn karaa, waa fududahay in la shaqeeyo, waa fududahay in la isu keeno oo la ilaaliyo, waana fududahay in la isticmaalo. Moodooyinka taxanaha LIW waxay daboolayaan 0.5～22000L / H.
JJ-CKW30 Hubinta Xawaaraha Sare ee Hubinta
CKW30 hubiyaha xawaaraha sare leh wuxuu isku daraa tikniyoolajiyadeena xawaaraha sare ee farsamaynta firfircoonida, farsamaynta nidaamka xawaaraha bilaa buuq la'aanta ah, iyo tikniyoolajiyadda xakamaynta wax soo saarka mechatronics ee khibrad leh, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon aqoonsiga xawaaraha sare，kala soocida, iyo falanqaynta tirakoobka ee walxaha culeyskoodu u dhexeeyo 100 garaam ilaa 50 kiilo, saxitaanka ogaanshaha wuxuu gaari karaa g 0.5g. Badeecadan waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarida baakado yaryar iyo wax soo saar aad u tiro badan sida kiimikooyin maalinle ah, kiimikooyin ganaax ah, cunto, iyo cabitaano. Waa hubiye dhaqaale oo leh waxqabad aad u sarreeya.
JJ-LIW BC500FD-Ex Nidaamka Wadista
Nidaamka qulqulaya ee BC500FD-Ex waa xalka xakamaynta socodka socodka miisaanka oo ay soo saartay shirkadeena iyada oo ku saleysan sifooyinka xakamaynta miisaanka warshadaha. Daadiintu waa hab quudin oo caan ku ah warshadaha kiimikada, guud ahaan, mid ama in ka badan oo qalab ah ayaa si tartiib tartiib ah loogu daraa fal-celiyaha muddo cayiman gudahood iyadoo loo eegayo miisaanka iyo heerka looga baahan yahay geeddi-socodka, si looga fal-celiyo waxyaabaha kale ee loo qoondeeyey si loo soo saaro xarunta la doonayo.
Fasalka aan caddeyn karin Qarax: Exd【IIC】IIB T6 Gb
JJ-CKJ100 Hubinta Weelka Qaadista ee Rullaluistemka
Taxane CKJ100 wiishka rullaluistemadka wiishku wuxuu ku habboon yahay xirxirida iyo miisaanka jeegga sanduuqa alaabta oo dhan markii la kormeerayo. Marka sheygu miisaankiisu hooseeyo ama miisaankiisu sarreeyo, waa la kordhin karaa ama la dhimi karaa wakhti kasta. Taxanaha alaabtan waxay qaataan naqshadda shatiga ee kala-soocidda miisaanka miiska iyo miiska duubista, taas oo meesha ka saareysa saameynta iyo saameynta culeyska qeyb ee jirka miisaanka markii sanduuqa oo dhan la miisaamayo oo la saarayo, wuxuuna si weyn u hagaajinayaa joogtaynta cabbirka iyo isku halaynta mashiinka oo dhan. Alaabooyinka taxanaha ah ee CKJ100 waxay qaataan naqshad qaabaysan iyo habab wax soo saar oo dabacsan, kuwaas oo lagu waafajin karo miisaska gawaarida ama qalabka diidmada iyadoo loo eegayo baahida isticmaalaha (marka aan la kormeerin), waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa elektarooniga, qaybaha saxda ah, kiimikooyinka wanaagsan, kiimikooyinka maalinlaha ah, cuntada, daawooyinka , iwm Khadka wax soo saarka baakadaha ee warshadaha.
Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Shear Beam Load Cell, Miisaanno La Xaqiijiyay, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Mass Calibration, Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah,